HO AN’NY: Babela Tower, Statue Nebokadnezara, ny Parlemanta Eoropeana Tour. | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ny tany no hisy mponina indray rehefa afaka ny Safo-drano, olona namorona ny fanjakana ary nanorina tany an-dohasaha Sennar tilikambo izay tonga any an-danitra.
Fa Andriamanitra nanapaka ny tetikasa amin’ny alalan’ny blurring ny fiteniny, miray saina mandra-dia, ka nampiely ny fahavaloko ho any amin’ny ambonin’ny tany.
An’arivony taona tatỳ aoriana, ny tany dia hisy mponina indray indray taorian’ny Ady Lehibe Faharoa, ny olona na dia eo aza ny fiteny samihafa nanao tilikambo vaovao any Strasbourg mba hampisehoana ny fanorenana indray ny fanjakana ny olona.
Hitantsika ny fitoviana ny roa tilikambo ny uncompleted sy ny anaran’ny fanjakana vaovao io izay mahatonga tsy ho an’Andriamanitra, fa ny maha-Andriamanitra diso « EOROPA ».
Toy ny hoe olona efa te hanohitra ny sitrapon’Andriamanitra sy ny mandà azy niresaka momba ny andriamani-diso sy maka arivo taona maro taty aoriana reconstructing ny Fanjakana ny olona.
Ny kolontsaina tandrefana aseho an’ohatra amin’ny eoropeanina izay nanomboka tamin’ny fanorenana ny fanjakana grika dia rava noho izany dia fivoahana an’i Gresy avy ao amin’ny faritra Euro. (Alfa sy Omega)
Mety ho valiny sasany ao amin’ireo andininy ireo.
Daniela, Chapter 2, ny 31-35
31 « Efa nisy, ry mpanjaka ô, fahitana. Here: a sarivongana, sarivongana lehibe, tena mamirapiratra, nitsangana teo anatrehan’i ianao, mahatsiravina ny mahita.
32 Izany sarivongana, ny lohany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahina,
33 ny ranjony dia vy, ary ny tongony vy sy tanimanga.
34 ianao nahita: tampoka nisy vato nendahana tsy tanana nanendreny, dia namely ny sarivongana, amin’ny tongony vy sy tanimanga, ka novakivakiny teo.
35 Ary tamin’izany dia tapaka, indray mandeha, vy sy ny tanimanga, varahina, ny volafotsy sy ny volamena, ho tonga toy ny akofa eo am-pamoloana amin’ny fahavaratra izy; ny rivotra nitondra azy ireny ho tsy misy soritry. Ary ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra.
Gresy moa io vehivavy io vato kely tahaka ny sarivongan’i Nebokadnezara, no hanesorana ihany, ka ento midina ny fanjakana EOROPA ho tonga ny fandrian-jaza ny sivilizasiona vaovao ambany fitondran ‘i Jesoa Kristy!
Inona no hataon’Andriamanitra amin’ity indray mitoraka ity, dia fantatsika avy ao amin’ny Baiboly ny faminaniana satria hanao isan’andro ary ny vokatra dia ho ny fiverenan’i Jesoa Kristy eto an-tany!
Ary ny avy tsy ho ela!
Ny fanontaniana dia tsy maintsy manontany tena isika dia isika raha tena afa-mandositra ny loza mahatsiravina sy ny loza izay namely ny izao tontolo izao sy ny olombelona, ​​ary raha toa isika ka ho anisan’ny tsara vintana ireo izay hahita ny fiverenan’ny ara-nofo Jesosy Kristy Tompontsika teo an-tendrombohitra Oliva .
Izay hahafaly ny malalako rahalahy sy anabavy ao amin’i Kristy te-mifampiresaka tsara amin’ny rehetra ny mpifandray rohy ity ny fidirana mivantana ny lahatsoratra rehetra;